अनशनरत डा. केसी र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति (पूर्णपाठसहित) « NepalBhumi
अनशनरत डा. केसी र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति (पूर्णपाठसहित)
२५ असोज, काठमााडौं । शैक्षिक सुधारका विभिन्न माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच गएराती ८ बुँदे सहमति भएको छ ।
यो सहमति भएसंगै विगत २८ दिनदेखि अनशनरत डाक्टर केसीले आज अनशन तोड्दै हुनुहुन्छ ।
शनिबार सरकारी वार्ता टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग छलफल गरेर डा. केसीसँगै ठोस वार्ता गरेपछि सहमति जुटेको हो ।सरकारले डा.। गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न बुधबार तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो भने डाक्टर केसी पक्षले पनि वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपीनाथ मैनाली र डा।केसीले हस्ताक्षर गरेका छन ।
वार्ताटोलीमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव मैनालीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा। गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलीप शर्मा रहेका थिए । डाक्टर केसीका तर्फबाट डाक्टर जीवन क्षेत्री र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहित चार जना सहभागी थिए ।